G/W/S/007/04 London, 24/02/2004
Waxaa wax lala yaabo nagu noqotay hadalkii ay dhawaan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelada Dhexe ee dalka Soomaaliya ka soo saareen xubno ka tirsan SRRC-da kuna sheegay in ay tahay in dalka Kenya laga wareejiyo shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ee halkaas mudada dheer ka soconayay.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu cambaareynayaa hogaamiyayaasha 16 bilood ka dib hadal aan habooneyn mid lagu abaal mariyo dowladdii martigalisay shirka dib u heshiisiinta ka soo saaray magaalada Jowhar ee dalka Soomaaliya.
Waxaan ugu baaqeynaa in madaxda ku sugan magaalooyin ay ka mid tahay Jowhar ee dalka Soomaaliya, kuwaas oo aan looga dhameyn shirka soconaya in ay ku soo laabtaan waxna ka qaataan sidii loo badbaadin lahaa dadkooda iyo dalkooda.
Hadalkii uu dhawaan ka jeediyay saxaafadda ma aheyn hadal la qaadan karo danjiraha dowladda Itoobiya wakiilka uga ah Soomaaliya Danjire C/casiis Axmed, kuna saabsanaa cidda qaadaneysa xilka soo xulidda xubnaha ka mid noqonaya baarlamaan ay Soomaalidu yeelato, maadaama hogaamiyayaashu ku heshiin waayeen qaabkii lagu soo xuli lahaa xubnaha baarlamaanka.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay isla markaana u xaqiijinayaa Danjiraha Dowladda Ithiopia in ay tahay arrin go'aan ka gaaristeedu leeyihiin ummadda Soomaaliyeed ciddii soo xuli laheyd xubnaha ay doonayaan in ay matalaan shacbiga Soomaaliyeed.
Arrinta uu soo hadal qaaday danjiruhu waxay sii murjineysaa waxna u dhimeysaa xiriirka labada ummadood ee walaalaha ah, sidaas darteed waxaan mar kale ku celineynaa in dowladda Ithiopia ku ekaato kaalmada ay ka geysaneyso fududeynta howlaha shirka dib u heshiisiinta Soomaalida uga soconaya dalka Kenya.
Ma dooneyno in aan meel ka dhacyo u geysano dowladda iyo shacbiga aan walaalaha nahay ee Ithiopia, Shacbiga Soomaaliyeed waligood waa xusuusan doonaan soo dhaweyntii ay shacbiga iyo dowladda Ithiopia soo dhaweeyeen dadka Soomaaliyeed qaran burburkii ka dib.
Waxaan rumeysnahay in ay jiraan ma xishoodayaal doonaya in ay ka faa'iideystaan cadaawadii labadii xukuumadood ee "Dargiga iyo Diktaatooriyadda" ku dhisnaa ee horseedka ka ahaa dagaaladii lagu hoobtay ee dhexmaray labada dal iyo labada shacbi dib u soo nooleeyaan hadal heynta cadaawad ku sheegta aan dhinacooda ka dhamaan ee ay ku doonayaan in ay ku gaaraan danahooda gaarka ah.
Lama arag dagaal iyo dhibaato aan laga heshiin bal dib ugu noqo dagaaladii ka dhacay dunida ee sababay geerida maaliyiin qof iyo burburkii baaxadda lahaa ee ka soo gaaray qeybihii uu dhexmaray dagaaladii qaraaraa ee adduunka ka dhacay, maantana isu dhexmaraya kuna wada nool dalalkooda sida "Gacal wadaagay dhiig iyo dhalasho".